Dowladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya Oo Sheegtay In Labo Sarkaal Ka Goosteen ONLF – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jig-jiga – Mareeg.com: Dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa sheegtay in labo sarkaal oo ka tirsanaa ONLF, islamarkaana todobaadkii hore la shaaciyey in sirdoonka Itoobiya ka afduubay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ay ka goosteen jabhadda ONLF, islamarkaana isu dhiibeen dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya.
Cabdinuur C/llaahi Faarax (C/nuur Yare) oo aha La-taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweynaha maamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in labadaas sarkaal ay ku tageen Itoobiya wadahadallo maalmahan socday iyaga iyo dowladda.
“Labadan sarkaal oo lagu kala magacaabo, Cali Axmed Xuseen iyo Sulub Cabdi Axmed waxay ku sugan yihiin Itoobiya, waa dad qaatay nabadda, dhawaan ayayna la hadli doonaan warbaahinta,” ayuu yiri Cabdinuur Yare oo la hadlay VOA.
Cabdinuur C/llaahi Faarax ayaa sheegay in labadaan sarkaal dhawaan la hadli doonaan warbaahinta iyo shacabka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya si ay u xaqiijiyaan iney ka baxeen ONLF oo muddo dheer dagaal kula jirta dowladda IToobiya.
“Dhawaan ayay la haldi doonaan labadan mas’uul shacabka deegaanka si ay u xaqiijiyaan inay kasoo baxeen kooxdii ay ka tirsanaayeen ayna nabadda qaateen,” C/nuur Yare.
Cabdinuur sheegay in labadaan sarkaal ay ku yimaadeen gaari ayna kasoo tageen magaalada Nairobi, haatanna ay ku sugan yihiin deegaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya, inkastoo uusan goob gaar ah magacaabin.
Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi, oo ah Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee ururka ONLF oo ku sugan magaalada London ayaa todobaadkii tegay markii ragaan Nairobi laga waayey sheegay in ay u cadaatay afduubka raggan habeenimadii Isniinta 27-kii bishii hore ee Janaayo.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee ONLF, C/raxmaan Sheekh Mahdi ayaa warbaahinta u sheegay in sir-doonka dalka Itoobiya ay labadan sarkaal ka afduubeen caasimadda Kenya ee Nairobi.
Wuxue beeniyey C/raxmaan Sheekh Mahdi warar soo baxay oo sheegayey in labadan sarkaal aan la afduubin oo ay u goosteen Itoobiya.
Labadaan sarkaal ayaa muddo magaalada Nairobi ee dalka Kenya u joogay wadahadal u socday dowladda Itoobiya iyo Jabhadda dagaalka kula jirta ee ONLF, waxaana ragas laga war helay iyagoo ku jira gudaha Itoobiya.